Ny fahazarana tsara Archives Archives - TELES RELAY
hatsaran-tarehy Lire la suite ... rosia Fanafody voajanahary Firaisana sy fifandraisana care
Vehivavy ambony vady any Maraoka - Lahatsary
Mpanamboatra horonantsary: ​​Bouchra Ijork Avo amin'ny tendrombohitra Atlas any afovoan'i Maroc dia tanàna lavitra saika anjakan'ny vehivavy Amazigh avokoa, vokatry ny fizarazarana ara-jeografika eo amin'ireo mahantra an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra, ny fiovaovan'ny maraokana…
Fanentanana amin'ny teny frantsay - TU EN ES CAPABLE - Video
Betsaka amintsika no mandalo ny fiainantsika, matetika tsy misy fahalalana. Matahotra handray an-tànana isika, tsy manana fahatokisan-tena intsony. Fantaro anefa fa afaka manao na inona na inona ianao. Tsy mino an'izany ve ianao? Jereo ity ... ► Minoa ny tenanao. Ianao ...
Ny fahalalana an ’Andriamanitra, ilaina!
Misy ve Andriamanitra? Ireto misy hevitra enina tsotra sy mahitsy izay miorina amin'ny finoana an'Andriamanitra iray ankehitriny sy tena izy. Ianao ve anisan'ireo olona maniry ny hanana porofo momba ny fisian'Andriamanitra taloha sy ho an'ny rehetra? Tsy misy fanerena. Tsy ...
Torohevitra 4 ho an'ny tsy hanary ny haavo mandritra ny fialantsasatra
Chinde Aogositra 10, 2020 0
Farany amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra! Ny fotoana afaka miala sasatra aorian'ny fanelingelenana tato anatin'ny volana vitsivitsy fa tsy tokony hohadinointsika ireo lesona. Ireto misy toro-hevitra 5 hijanona amin'ny haavony! Ny toetr'andro tsara dia mifototra amin'ny farany! Eh eny,…
Sarotra matetika ny fitantanana fa tsy fantatrao fa ny saka dia mety tsy isalasalana…
Ny setroka dia sarotra be indrindra amin'ny fitantanana azy saingy fantatrao ve ny saka iray tsy isalasalana fa hanamaivana azy? Ny setroka dia sarotra be indrindra amin'ny fitantanana azy saingy fantatrao ve ny saka iray tsy isalasalana fa hanamaivana azy? Manazava i Trendy…
Fijoroana vavolombelona: ny fahasimban'ny fisakaizana misy poizina
bryanekobe Jona 30, 2020 0
Fijoroana vavolombelona: ny fahasimban'ny fisakaizan'ny poizina na dia tiantsika hanadino izany aza, ny fisakaizana dia mety hanimba tahaka ny fitiavana ary vao mainka koa rehefa olona akaiky anao izay milalao amin'ny fihetseham-ponao. ......